Fiahiana ara-tsosialy : mitaky ny hamoahana ny lalàna vaovao ny mpiasa | NewsMada
Maromaro ny hetsika nataon’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps), ny herinandro lasa teo. Atrikasa niarahana tamin’ny mpitsara, ny mpanao gazety ary ny fiarahamonim-pirenena (OSC). Nahazo fiofanana koa ny solontenan’ny mpampiasa, ny delege sendikaly ary ny fanjakana mampiasa mpiasa tsy raikitra (ECD). Nahatratra 125 ny mpandray anjara. Nambaran’ny ben’ny Tanànan’ny kaominina Manorofify Toliara, isan’ny mpiofana fa « anjaranay indray no manaparitaka any ambanivohitra fa manan-jo ara-tsosialy ny mpiasa. Mila miditra mpikambana ao anatin’ny Cnaps avokoa ny mpiasa rehetra”.
Ho an’i Marimbeloson William, sendikalista sady filohan’ny Fiaraha-midiniky ny mpiasa Malagasy (CTM), tanjona amin’izao fiofanana izao ny hananan’ny Malagasy tsirairay fiahiana ara-tsosialy. Nisy vaomiera dimy natsangana taorian’ny fiofanana, hanohizana ny fanentanana sy hizarana ny traikefa azo.
Hitombo ny fanampiana raha mivoaka
Maro tamin’ireo mpiofana nangataka ny hamoahana ny lalàna vaovao mifehy ny fiahiana ara-tsosialy, satria efa natolotry ny Cnaps ny taona 2010 izany, nefa tsy avoakan’ny fanjakana sy dinihin’ny parlemanta mihitsy. “Raha mivoaka io lalàna io, hitombo ny fanampiana azon’ny mpiasa”, hoy Rakotonirina Paul Edissé, mpiasan’ny Jirama, sy Rtoa Florette Josoa, avy ao amin’ny diosezin’i Toliara.
Nametraka tranoheva teo an-tampo-tanànan’i Toliara ny Cnaps, ahafahan’ny vahoaka mahafantatra bebe kokoa azy. Nisy koa fifanarahana fiaraha-miasa teo aminy sy ny CTM ary nilaza ny tale jeneralin’ny Cnaps, Arizaka Rabekoto Raoul fa maro ny fampitaovana omeny ireo ity fiombonana sendikà ity, hanatsarany ny asany.
Manampy ireo, nampitomboana, lasa 363 ny mpikambana ao anatin’ny klioba Cnaps zandriolona any Toliara. Dieny kely, mahalala ny zon’ny mpiasa sy ny fiahiana ara-tsosialy ny ankizy sy ny tanora.